मोटोरोलाले बार्सिलोनामा फेब्रुअरी २ | मा एक कार्यक्रमको घोषणा गर्‍यो Androidsis
धेरै कम्पनीहरू बार्सिलोना मा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस २०२० कार्यक्रम अघि घण्टा आफ्नो अर्को समाधान देखाउन चाहन्छन्। ती मध्ये मोटोरोला पनि हो, जुन यसले पोष्टरको माध्यमबाट पुष्टि गर्दछ कि यसले धेरै फोनहरू घोषणा गर्दछ, ती मध्ये ती मध्ये एउटा नयाँ मोटो G8 र मोटो G8 पावर लाईट हेर्न.
El घटना फेब्रुअरी २ for को लागि बिहान :23:०० बजे निर्धारित गरिएको छ।, कम्पनीले देखाइएको छविको बारेमा कुनै विवरण प्रकट गर्दैन। न त हामी पहिलो मोटोलाई स्टाइलस र चर्चित मोटो एज + को साथमा हेर्न अस्वीकार गर्छौं, यो पछि मात्र अमेरिकामा भर्जानबाट मात्र उपलब्ध छ।
1 मोटो G8 र G8 पावर विवरण प्रकट
2 मोटो G8 पावर, G8 को एक भिटामिनयुक्त संस्करण
3 हामी मोटो एज + को बारेमा के जान्दछौं
मोटो G8 र G8 पावर विवरण प्रकट
ती मध्ये पहिलो एक्सडीए द्वारा लीक भएको छ, जसले 6,39..2--इन्च एचडी + एलसीडी स्क्रिन, २ देखि GB जीबी रम र 4२ देखि via 32 जीबी विस्तार हुने माइक्रोएसडी मार्फत उल्लेख गर्दछ। निर्माताले छनौट गरेको प्रोसेसर क्वालकम स्नैपड्रैगन 64 and र डिजाइन हो यो G8 Plus को जस्तै छ.
पछाडिको भागमा यसले १ 16-मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर, २ मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर र-मेगापिक्सलको अल्ट्रा-वाइड सेन्सर थपेको छ, यस केसमा सेल्फी is MP छ। मोटो जी सँग ,2००० एमएएच ब्याट्री हुनेछ जब १०W फास्ट चार्जिंग र एन्ड्रोइड १० एक पटक आयो।
मोटो G8 पावर, G8 को एक भिटामिनयुक्त संस्करण
El मोटो G8 पावर G8 मोडेलको एक संस्करण हो, प्यानल .6,66..4 इन्च छ, GB जीबी र्याम छ र भण्डारण GB 64 जीबी पनि माइक्रोएसडीद्वारा विस्तार योग्य छ। यसले समान स्न्यापड्रैगन 665। प्रोसेसर प्रयोग गर्दछ र प्रदर्शनको सर्तमा यो भिडियो रेकर्ड गर्दा वा फोटो खिच्दा उल्लेखनीय हुनेछ।
क्यामेरा विभागमा, G8 पावरले १ MP MP लेन्सलाई मुख्य लेन्सको रूपमा, २ MP MP म्याक्रो लेन्स, MP MP को अल्ट्रा-वाइड लेन्स र चौथो MP MP लेन्सलाई टेलिफोटो लेन्सको रूपमा स्थापित गर्दछ। यस अवस्थामा फोनको aut००० एमएएचको स्वायत्तता हुने छ र यो उही १० डब्लु द्रुत चार्जको साथ आउँदछ।
हामी मोटो एज + को बारेमा के जान्दछौं
यो निस्सन्देह कम्पनीको एक रहस्यमय टर्मिनल हो र जो युरोप प्रसिद्ध हुन सक्छ, अन्य उपकरण निर्माताहरूले प्रयोग गर्ने प्राकृतिक। एज + लाई स्न्यापड्रैगन 865। SoC मा चढिन्छ र १२ जीबी रैमको जम्मा छ, यो पक्कै पनि सबै भन्दा राम्रो आश्चर्य को एक हो।
छवि - Mobile १ मोबाईलहरू।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » मोटोरोलाले बार्सिलोनामा फेब्रुअरी २ for को लागि कार्यक्रमको घोषणा गर्‍यो